9ka Beddel ee Ugu Fiican VideoScribe | Androidsis
Ignacio Sala | 11/08/2021 18:00 | La cusbooneysiiyay 11/08/2021 21:36 | Tababarada
VideoScribe waa barnaamij softiweer animation ah oo sabuurad ah oo ay dhistay Sparkol, kaas oo u oggolaanaya qof kasta oo aan lahayn aqoon animation abuuraan animations sabuurad, iyo sidoo kale fiidiyowyo sharraxaad xirfadeed u leh dhammaan aagagga.
Iyada oo leh sawirkiisii ​​hore loo qorsheeyay iyo saamaynta animation, waxaan si fudud ugu soo bandhigi karnaa fikrad murugsan hab cad, fudud, oo aad u muuqaal badan. VideoScribe waa codsi aad u fiican ujeeddooyinkan laakiin ma aha kan ugu fiican dhammaan kuwa laga heli karo suuqa, in kasta oo uu yahay kan ugu caansan. Haddii aad rabto inaad ogaato waxa beddelka ugu wanaagsan ee VideoScribe, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
VideoScribe wuxuu leeyahay tiro xaddidan taas oo aan ka dhigayn codsiga ugu fiican ee noociisa ah:
Kaliya fiidiyowyo karti leh ayaa lagu samayn karaa.
Fiidiyow sabuurad kaliya ah ayaa la samayn karaa. In kasta oo ay tani ku filnaan karto qaar, haddana ma noqon karto habka ugu wanaagsan ee farriintaada loo gudbiyo.
Waa la bixiyaa waxayna ku xiran tahay qorshaha aan u baahannahay, khidmadda billaha ah waxay u bixi kartaa isha wejiga iyo qayb kelyaha ah.
2 Qaniin (Web)
4 Sharax (Web)
5 Crazytalk Animator 3 (Shabakada)
6 Animaker (Shabakadda)
8 Ka baxsan (Shabakadda)
9 PowToon (Shabakad)
Inta badan tusaalooyinka ayaa laga heli karaa Doodly Waxay yihiin fiidiyowyo u eg sabuurad, laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto qaab-fiidyo-qaab-fiidyo-qaab-muraayad ah iyo fiidiyowyo sabuurad ah. Looxa quraaradu dhab ahaantii waa template meesha qoraalku wuxuu ka muuqdaa dhinaca kale ee darbiga galaaska halkii ay ka ahaan lahayd aag goglan, sidii haddii ay ahayd nidaam lakab.
Doodly wuxuu na siiyaa maktabad ballaaran oo ay ku jiraan maqal, faylal sawir, qalab ... Inta badan walxaha waa la hagaajin karaa oo dib baa loo samayn karaa si aan ula jaanqaadno baahiyahayaga. Barnaamijkan wuxuu ku fiican yahay abuurista fiidiyowyo qaab doodle ah iyada oo aan lacag ku bixin barnaamijyo aad qaali u ah sida VideoScribe.
Habka tafatirka ee Doodly waa mid aad u fudud, waxaad si sahlan ugu sameyn kartaa fiidiyow 3 talaabo fudud:
Sii mashruucaaga magac kadibna dooro template waxaan rabnaa inaan isticmaalno.
Tallaabada labaad waxay ka kooban tahay samee fiidiyow leh ilaa 10 xaraf, 100 sawir iyo 200 qalab oo kala duwan. Waxay noo oggolaaneysaa inaan ka dooranno xallinta illaa heerka jir -dhismeedka.
Talaabada ugu dambeysa waa dhoofinta fiidiyowga ilaa qaabka aan ka rabno kala duwanaanshaha ballaaran ee dalabku na siiyo.
Himilada Bitable waa in la abuuro abuurista fiidiyowyada mid fudud oo qof walba u adeegsan karo dhibaato la'aan, iyada oo aan la soo degsan wax codsi ah maadaama ay ku shaqeyso shabakadda oo keliya, sidaa darteed waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan nidaamyada hawlgalka. Waxay na siisaa a tiro badan oo ah qaab -dhismeedyada internetka si ay nooga caawiyaan abuurista fiidyowyo ay weheliyaan casharro tiro badan.
Markaan dooranno shaxanka aan u baahanahay, waa inaan doorannaa qaabka noo xiisaha badan mar walba iyada oo loo marayo xulashooyinka kala duwan ee ay na siiso. Intaa waxaa dheer, waxay noo oggolaanaysaa inaan isticmaalno qorshayaasha midabka ku saleysan mawduucyada caadiga ah, in kasta oo aan sidoo kale abuuri karno qaab noo gaar ah oo ku habboon animation -ka
Talaabada ugu dambeysa waa dooro codka maqalka. Dareenkan, Biteable wuxuu na siinayaa awooddeena tiro badan oo codad ah si aan u helno midka aan raadineyno mar walba.
Dhammaan fiidiyowyada aan abuurno, marka dhoofinta, ku dar calaamad -biyood. Haddii aan dooneyno inaan meesha ka saarno, waa inaan bixinnaa rukun -galinta oo qiimaheedu yahay 99 doollar sanadkii oo waliba nagu siineysa helitaanka agab dheeri ah.
Xulashada lacag bixinta ayaa sidoo kale noo oggolaanaysa inaan u soo dejino fiidiyowga kooxdayada. Moodooyinka badankood waxaa loogu talagalay inay kor u kacaan muuqaalada ilaa 5 ilbidhiqsi dheer. Nuxurka muuqaaladan waa la tafatiran karaa, sidoo kale muddada, font -ka qoraalka la isticmaalay iyo sidoo kale baaxadda.
Tilmaamaha ugu xiisaha badan ee Easy Sketch Pro waa in ay bixisaa in ka badan 12.000 sawirro qaali ah iyo heeso dhawaaqyo ah, Astaamaha si buuxda loo habeyn karo iyo suurtogalnimada abuurista xiriiryo ku dhex jira fiidyowyada fiidiyowyo kale iyo sidoo kale isku xirnaanta bogagga shabakadda, oo ay ku jiraan shabakadaha bulshada ee ugu waaweyn.
Easy Sketch Pro wuxuu aad ugu eg yahay Doodly. Waxay bixisaa naqshad nasasho leh, iyo sidoo kale a barnaamij bilow ah oo aad loo heli karo oo leh tiro badan oo ah ikhtiyaarrada habaynta. Sawirada iyo tafatirka jadwalka ayaa noo oggolaan doona inaan sida ugu badan uga faa'iidaysanno tan iyo codsiyada kale ee dhammaystiran marka ay gaabinayso.
Naqshad fudud ayaa leh badan is-dhexgalyada fiilada taasi waxay noo oggolaanaysaa, tusaale ahaan, in lagu daro jawaabaha emaylka ee tooska ah, badhamada wicitaanka, is -weydaarsiga warbaahinta bulshada ... iyo kuwo kale.
Qiimaha barnaamijkani waa 97 doollar oo keliya hal lacag bixin oo ah nooca ugu dhammaystiran. Haddii aanaan rabin inaan bixinno lacag aad u badan, waxaan dooran karnaa qorshaha aasaasiga ah ee lagu heli karo $ 37.
cunt Sharax waxaad abuuri kartaa animations sabuurad cad iyo 2D ama 3D fiidiyowyo firfircoon. Waxay la jaan qaadi kartaa tiro badan oo qaabab muuqaal ah, sawirro aan ku dari karno abuuritaankeenna. Is -dhexgalku si toos ah ugama soo muuqan si fudud, wax macquul ah oo tixgalinaya in animation -ku aysan ahayn geedi socod fudud.
Si kastaba ha noqotee, waqti aan u hurnay, waan qabsan karnaa oo ka faa'iideysan karnaa, maadaama ay noo oggolaan doonto u habeyn abuuritaankeena ugu badnaan. Ahaanshaha degel ma aha codsi, waxaan ku adeegsan karnaa nidaam kasta oo hawlgal. Markaan abuurnno fiidiyaha, waxaan u dhoofin karnaa waxa ku jira faylka fiidiyaha si aan ula wadaagno ama ugu qaadno aaladaha kale.
Explaindio waa mid ka mid ah kuwa ugu jaban ee lagu beddeli karo VideoScribe, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon kuwa qaadaya tallaabooyinkooda ugu horreeya animation nooc kasta ha ahaadee. Laakiin si kastaba ha ahaatee, ma laha qalabyo xirfadeed oo badan Waxa laga filayo fiidiyaha ku wajahan badeecad ganacsi ama bandhig.
Crazytalk Animator 3 (Shabakada)
Waxaan dhihi karnaa si aan u isticmaalno Animator Crazytalk si loo abuuro animations waa sida xakamee bahal dijital ah. Waxay u oggolaaneysaa adeegsadayaasha inay galaan addimada iyo wejigooda dabeecad kasta si ay asal ahaan u keenaan cunsur nolosha sidaas darteedna awood u yeelan kara inay habayn karaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada.
Codsigan wuxuu diiradda saarayaa dhammaan isticmaaleyaasha doonaya qaado tallaabooyinkaaga ugu horreeya ee animation. Codsigu wuxuu noo oggolaanayaa inaan tafatirno ficillada jilayaasha iyo sidoo kale tilmaamaha ay sameeyaan hab aad u fudud.
Waxay noo oggolaanaysaa inaan soo dhoofsanno sawirro aan ku kaydinnay qalabkeenna, oo ay ku jiraan kuwa laga helay Qaabka Photoshop, si loogu adeegsado sawirada jilayaasha sidaasna looga shaqeeyo tibaaxaha iyo dhaqdhaqaaqyada.
Calaamadaha 2D waxay si fudud ugu dhex wareegi karaan meel 3D ah, oo bixinaya dareen firfircoon in aan si dhib yar uga heli karno codsiyada kale ee noocan ah.
Haddii aadan jeclayn fikradda ah ku rakib kombiyuutarkaaga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso beddel kale sida Dhaqaaqe, maaddaama ay ka shaqayso nidaam kasta oo hawlgal iyada oo loo marayo biraawsar kasta. Kaliya waa inaan is -diiwaangelinno, sameysanno koonto ka dibna dooranno qaabka fiidiyaha aad rabto.
Si aan u abuurno fiidiyowyadeenna, waa inaan sameynaa jiido oo ku rid shayada waqtiga annagoo buuxinayna marankii maktabadaha ee ay na siiso.
Animaker wuxuu na siiyaa a casharro tiro badan Taasi waxay xallin doontaa wixii su'aalo ah ee soo bixi kara inta aan adeegsanayno, tan iyo markii ugu horreysay, waxay u ekaan kartaa wax yara adag.
Faa'iidada ugu weyn, sidaan kor ku soo sheegay, Animaker ayaa na siiya waa inaan awoodno si dhakhso ah u bilow abuurista waxa ku jira adigoon ka walwalin iswaafajinta ama rakibidda software -ka.
VideoMakerFX waa mid ka mid ah codsiyada yar ee liiskan ku jira uma baahna in la bixiyo qayb -bille ah Si loo adeegsado, kuma jiraan summadaha biyaha ama nooc kale oo xaddidaad ah. Waxaa jira siyaabo badan oo loo abuuri karo fiidyowyo tayo sare leh iyada oo loo marayo sida fiidiyowyada loo adeegsado, qorista kinetic-ka, iyo bandhigyada qaabka sabuuradda.
Codsiga waxaa lagu qiimeeyaa $ 37, qiimaha aan ku heli karno aalad aan ku abuuri karno animation iyo fiidiyowyo sharraxaad nooc kasta leh. Is -dhexgalka adeegsadaha ayaa aad u fudud in la isticmaalo, sidaa darteed si dhakhso leh ayaan u qabsan karnaa, oo leh qalooc waxbarasho oo aad u yaraaday oo noo oggolaan doona inaan xoogga saarno abuurista fiidiyowyada.
Ka baxsan (Shabakadda)
Dheeraad ah, oo hore loogu yiqiin Goanimate, waxaa loogu talagalay macallimiinta iyo ardayda, inkasta oo sidoo kale si ballaaran loogu adeegsan karo nooc kasta oo ganacsi ah si loo abuuro bandhigyo wax soo saar. Wuxuu ku shaqeeyaa biraawsar, sidaa darteed waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan nidaamyada hawlgalka ee suuqa.
Waxay ina siinaysaa awooddeena a tiro badan oo ah animations online iyo bandhigyo, sidaa darteed abuurista bandhigga, fiidiyaha ama sharraxaaddu waa geedi socod deg deg ah oo fudud markaan baranno istcimaalka adeegsadaha, is -dhexgal fudud oo caddaalad ah laakiin ku habboon abuurista animations tayo leh.
PowToon yahay oo sii ahaan doona mustaqbalka, mid ka mid ah qalabka sheekada ee ugu fiican ee internetka. Waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa labadaba xarumaha waxbarasho ee u dhexeeya macallimiinta iyo ardayda, iyo sidoo kale in la abuuro sawir -gacmeedyo firfircoon iyo nooc kasta oo dhaqdhaqaaq ah.
Adeeggan ayaa noo dhigaya a tiro badan oo saamayn animation ah iyada oo loo marayo liiska hoos-u-dhaca, si aan si dhakhso ah u tijaabin karno hawlgalkeeda. Waxa kale oo ka mid ah tiro aad u badan oo ah qaab -dhismeedyo bilaash ah oo aan u adeegsan karno inaan ku abuurno bandhigyo dhowr ilbidhiqsiyo gudahood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Top 9 Beddelka in VideoScribe